Jilicsanaanta kuleylaha: jaceylka leh abeesooyinka xayawaanka xayawaanka ah
Beereyda yare waxaa loola jeedaa qaadashada masuuliyad gaar ah
Snake ayaa badanaaba dhaliya falcelinta kala duwan ee bani-aadmiga: nacayb ama jahwareer. Dadkani waxa ay ku riyaaqayaan nimcada abeesada si adag uma qanacsanaan karaan marka xayawaanka aan sharciga lahayn ay awoodaan inay guuraan, oo kaliya iyagoo dhaqaajinaya miisaanka caloosha.
Jilicsanaanta kuleylaha: jahwareerka leh abeesooyinka terrariums
Kadibna waxay daadiyeen xayawaanka xoolaha.
Abaalku waa, waxay astaan ​​u tahay qof walba, oo aan ahayn xayawaanka caadiga ah. Horeba waxaa laga helaa nafaqada in abeesadu ay si buuxda uga duwan tahay tusaale ahaan hamsters, doofaarrada guinea iyo bakaylaha dhicidda.
Dhibaatooyinka badanaa waxay cunaan xayawaanka nool. Xitaa haddii cunnadu aysan sii noolaan karin, tusaale ahaan, maamulka qoob-ka-dhalid-maalmeedka la dhalaaliyay ama midab-yaraha faraska ah ayaa ah xeerka eeyaha qaarkood. Aad uga duwan kan caadiga ah ee caadiga ah ee jajabyada caadiga ah ee guriga, taas oo lagu quudin karo qaabka kalluun ama saxan caag ah.
Haysashada nabarrada ayaa ah mid xoogaa ka adag oo ka qiimo badan habka doofaarka guinea. Waxa kale oo jira kharash aad u sarreeya, z. B. Qiimaha korontada ee loogu talagalay laydhka kulaylka (laga yaabo inay sidoo kale kuleylka kuleylka) iyo wada-qaali qaali ah.
Maydhin cagaaran oo ku jirta xagasha
Goolhayaha masuulka masuulka ah wuxuu bixiyaa xayawaankiisa xaaladaha nololeed ee suurtagalka ugu fiican ee laga helo terrarium.
Waxaa muhiim ah in baqshadda dabiiciga ah ee loo yaqaan 'snakeum' loo habeeyey, sababtoo ah ma aha in qof kasta oo nabdooni dareemo jawi isku mid ah. Masaska gurigu waa inuu lahaadaa dhul-beereed leh xajmiga weyn, halka geedaha geedku ay dareemaan raaxo-darrada terrarium ee u muuqda in ay sare u kacaan halkii ay ka ballaaran lahaayeen.
Maqaalka habeenkii ah ee maskaxda, waxay macno u leedahay in laydh leh iftiin guduud ah ama gudaha terrarium, maxaa yeelay masaska ma dareemaan iftiin ka muuqda sawirkan midabka kadibna ma dareemaan in ay buuqaan dadku.
Goolhayaha mustaqbalka ee mustaqbalka waa in uu sidoo kale hubiyo in berriga si fiican u hawo. Qalabka hawo-galinta ku filan ayaa lagu gaari karaa iyada oo la adeegsan karo xaashida birta ah ama faashad caag ah, xaqiijinta meelaha hawadu ku jirto. Xaaladda hawo-qaadashada ee ku habboon waxay u aragto in la rakibo laba hawo-furan. Dhinaca dhinac ee aagga hoose, dhinaca dhinaca kale ee aagga sare.
Inta badan noocyada masaska waxay u baahan yihiin meel qarsoon si ay uga fariistaan ​​waqtiyada nasashada. Iyada oo ku xiran nooca nabarka, qalabyada fuulista ee habboon, goobaha qorraxda lagu kululeeyo iyo dalool waraabinta, taas oo sidoo kale loo isticmaali karo abeesiga sida qalabka lagu maydho, sidoo kale waxay ka tirsan tahay xarunta ku habboon.
oo muhiim ah:
Qofkasta oo raba in uu xajiyo khadadka ku jira qaybaha "sunta" iyo / ama "ka badan mitirka 3 ee cabbirka" waa in ay ansixiyaan xafiiska amniga bulshada. Marka lala macaamiliayo masaska sunta ah, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in ay samayso xiniinyaha ka hortagga dabka ee guriga si ay u awoodaan in ay qaataan countermeasures inta lagu jiro qaniinyada.